သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် မည်သူနည်း။? | Siyin Chin Baptist Church
Posted by thawngno ⋅ May 17, 2011 ⋅ Leaveacomment
သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် မည်သူနည်း။ “ဘုရားသခင်တည်ရှိသလား” ဟူသော မေးခွန်းနှင့် မတူပေ။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် တည်ရှိသလောဟူသော မေးခွန်းကို လူအနည်းငယ်ကသာ မေးမြန်းတတ်ကြသည်။ လွန်ခဲ့ သော နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ ခန့်တွင် ဣသရေလလူမျိုးများကြားထဲတွင် သခင်ယေရှုသည် ဤလောက၌ စစ်မှန်သော လူသားတစ်ဦး အဖြစ် အသက်ရှင်ခဲ့သည်ကို ငြင်းဆိုဖွယ်ရာမရှိပေ။ သခင်ယေရှု၏ ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကို ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သည့်အခါတိုင်းတွင် ငြင်းခုံမှုများ ရှိတတ်ကြသည်။ တခြားသော ဘာသာကြီးတို့သည် သခင်ယေရှုကို ပရောဖက်တစ်ပါး၊ ကောင်းသော ဆရာတပါး၊ သိက္ခာရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်တပါးဖြစ်သည်ဟု သွန်သင်တတ်ကြသည်။ သခင်ယေရှုသည် ပရောဖက်တပါး၊ ကောင်းသောဆရာတပါး နှင့် သိက္ခာရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်တပါးထက် သာလွန်သည်ဟု သမ္မာကျမ်းစာက ပြောခဲ့ပါသည်။
C.S. Lewis က သူ၏စာအုပ် Mere Christiarity ထဲတွင် ဤသို့ ရေးသားထားခဲ့ပါသည်။ “သခင်ယေရှု အကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လူတွေပြောလေ့ရှိသော မိုက်မဲသော အရာတို့ကို ရပ်တန့်ရန် ကျွန်တော်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့သည်။ “ကျွန်တော်သည် သခင်ယေရှုကို ကြီးမားသော အကျင့်စာရိတ္တ သွန်သင်သောဆရာအဖြစ် ယုံကြည်လုနီးပါး ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော် သူကြွေးကြော်ခဲ့သောသူသည် ဘုရားဖြစ်ကြောင်းကို ကျွန်တော် မလက်ခံခဲ့ပေ။ ၄င်းခံယူချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ မဖွင့်ပြော အပ်သော စကားပဲဖြစ်ပါသည်။ သာမန်လူသားတစ်ဦးက သခင်ယေရှုသည် ကြီးမားသော အကျင့်စာရိတ္တသွန်သင်သူဟု ပြောခဲ့ လျှင် အဓိပ္ပာယ်မရှိပေ။ သူသည် စိတ်ဝေဒနာရှင် (သို့) ကြက်ဥကို ခေါက်ကွဲပြီး ရေနွေးထဲတွင် ကြိုချက်သော သူနှင့် တူပါလိမ့် မည်။ (သို့) သူသည် ငရဲကို အုပ်စိုးသူ နတ်မင်းကြီးပဲဖြစ်ပါသည်။ မိတ်ဆွေသည် ရွေးချယ်မှုပြုနိုင်သည်။ မိတ်ဆွေသည် သခင် ယေရှုကို ဘုရားသခင်၏ သားတော် (သို့) ရှုးသွတ်သောသူ (သို့) တခြားအပြစ်ဒုက္ခရိုက်ပြုသောသူဟု ပြောနိုင်ပါသည်။ သူ့ကို နတ်တစ်ယောက်အဖြစ် သတ်ပစ်နိုင်သည်။ သူ့ကို စံတွေးဖြင့်လည်း ထွေးနိုင်သည်။ သို့သော် အဓိပ္ပာယ်မရှိသော စကားဖြစ်သည့် သခင်ယေရှုသည် ကြီးမားသော ဆရာတပါးဖြစ်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အဆုံးမသတ်အပ်ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့ စိတ်ထင်သည့်အတိုင်း သူ့ကို မတွေးတောအပ်ပေ။ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့တွေးတောခြင်းကို ဂရုစိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
Khamtungah Buddist Saang tam vaial »